Godane oo lagu dilay Duqeyntii Xalay? | Keydmedia
Nairobi (KON) - Saraakiil ka tirsan Wasaradda Gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegay in Duqeyntii Xalay ee ka dhacay Deegaanka Dhaay Tubaako & Sablaale lagu dilay hoggaamiyaha Al-shabaab Axmed Cabdi Godane.
Macluumaad dheeri ah oo ay Keydmedia Online ka heleyso Mas'uuliyiin ka tirsan Safaaradda Mareykanka ee Kenya ayaa sheegaya in diyaaraddaha Droneska ee Xalay ku dileen Deegaanka Dhaay Tubaako & Sablaale hoggaamiyaha Al-shabaab Axmed Cabdi Godane iyo Saraakiil kale oo la socday.
Afhayeen u hadlay Wasaaradda Gaashaandhiga Maraykanka, John Kirby, ayaa sheegay inay faafaahinta soo bandhigi doonaan xilli dambe, mana uusan xaqiijin Wararka sheegaya in Godane lagu dilay Duqeyntii Xalay.
Dowladda Federaalka iyo Mareykanka ayaa dhowr jeer sheegay in ay Dagaal ku dileen Axmed Gadone.
Mas'uulkaan oo ay KON ka heshay Macluumaadka ayaa sheegay in Mareykanku uusan heynin Cadeyn ama Sawirro muujinaya Dilka Axmed Gadone, wuxuuna sheegay in Wasaaradda Gaashaandhiga Mareykanka ay Galabta soo bandhigi doonto Faah-Faahinta Weerarkii Xalay.
Ilaa haatan wax war ah kama soo bixin Al-Shabaab.
Xalay Fiidkii Diyaarad Drone ah oo laga leeyahay Mareykanka ayaa Weerar Cirka ah ku qaadey Xarunta ay uga shirayeen Al shabaab Duulaanka uga imaanaya Ciidanka DFS & AMISOM, waxaana Kulanka uu ka dhacayay inta u dhaxaysa Dhaay Tubaako & Haaway, sida uu sheegay Gudoomiyaha Gobolka C/qaadir Siidii.
Dhanka kale, Kooxda Al shabaab ayaa ku xiray Dad badan Saakay Deegaanka Dhaay Tubaako & Sablaale, kuwaasi oo ay uga shakiyeen inay hageen Diyaarado Duqeymo Cirka ka fuliyay Gobolka Shabeellaha Hoose.
Keydmedia Online - Nairobi / Mogadishu